Ny Expert Filter Semalt Expert dia afaka manoro ny Google Analytics
Ny fisian'ny tranonkala iray amin'ny aterineto dia loharano voalohany ho an'ny tompon'ny tranonkala. Ireo fanapahan-kevitra momba ny tranokala mankany amin'ny tranonkala iray manokana dia miankina amin'ny antontan'isa momba ny fifamoivoizana voasoratra anarana amin'ny fitaovana fanaraha-maso toy ny Google Analytics. Ny Google Analytics dia afaka hanamora ny famantarana ny fakana an-tsoratra spam mampiato ny rejisitra diso. Mahagaga fa tsy mahavita manara-maso tsara ny tranonkalany ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala.
Ny filaharam-potoana mety mamoaka ny tarehimarika mifanentana amin'ny fizotran'ny fifamoivoizana fa tsy manamarina ny spam dia manome antoka ny fisoratana anarana amin'ny angona sarobidy ao amin'ny Google Analytics.
Ross Barber, mpitantana ny Success Successor Semalt, dia manolotra dingana isan-tsokajiny amin'ny fampiasana Google Analytics ho an'ny dingam-panaraha-maso azo atao.
Tokony hanana vondron'ireo tranonkala
Ny fampiasana ny sivana ao amin'ny Google Analytics dia manome vahaolana toy ny fanilikilihana ny rafitra misoratra amin'ny kaonty miverimberina. Ny fanamafisana ny famahanana data dia tsy azo antoka. Ataovy azo antoka ny fampiasana ny sivana iray sy ny fijerena tsy voasivana ao amin'ny konsole Google Analytics mba hiantohana ny fiarovana amin'ny fanitsiana spam. Zava-dehibe ny fikarohana sy hahatakatra ny zavatra takiana amin'ny fizotran'ny filtration.
1. Mialà eo amin'ny IP
Fintino ny IP sy ny adiresy hafa tsy voatery hanaraka ny adiresy IP raha ilaina.
Fidio ny vondrona voafidy.
Eo ambanin'ilay menu Exclude, tsindrio ny 'Equal To' amin'ny 'Traffic avy amin'ny adiresy IP'.
Hanampy ny IP anao sy ny adiresy fanampiny amin'ny adiresy IP Adiresy.
2. Atsaharo ny BOTS
Ny fialana amin'ny fitsangatsanganana ny tranonkalan'ny BOTS sy fanasoketana vokatry ny referendum spam dia afaka mandositra ny fisoratana anarana amin'ny Google Analytics amin'ny alalan'ireo dingana manaraka:
Karakarao ny karazan-tsakafo ho ampiasaina
Tsindrio ny Exclude
Eo ambanin'ilay saha fisivan-tsarimihetsika (click Filtering) click on Organisation ISP
Eo ambanin'ny sivana Fitaovana kopia sy fametahana - ^ (Microsoft corp (oration) | | inktomi corporation | yahoo! Inc. | Google inc. | Stumbleupon inc.) $ | Gomez
3. Ampidino irery ny domy
Ny olona ratsy fanahy dia afaka manara-maso ny fango loharanom-pandrefesana mba hangalarana ny codec de suivie ao amin'ny Google Analytics mba hamoaham-baovao tsy marina. Ny fanoloana ny anaoDomeana amin'ny anaran'ny tranonkala dia miantoka ny fiarovana.
Fitaovana fisakafoanana - Custom
Ny saha fidirana - Hostname
Fipetrahan'ny loko - YourDomainHere \_ .com
Raha toa ka (.ORG) ilay tranonkala dia tadidio ny solosaina (.com) amin'ny (.org) sns.
4. Hanafoana ny fanalahidin'ny fanontana rehetra
Ity sivana avo lenta ity dia manara-maso ny fomba fijery iray / pejy ahitana pejy maromaro voasoratra anarana tsy manan-tsahala ao amin'ny Google Analytics. Eo ambanin'ilay sivana avoara alefa:
Saha A >> Request URL >> (. *) \_?
Saha B >> LEAVE BLANK
TARIKA TOETRA >> Request URL >> $ A1
5. Hanampiana anaran-toetran'ny URL
Mba hahitana marina ny loharanon'ny fitsidihana indrindra raha toa ka manome sehatra maromaro isan-kerinandro amin'ny alalan'ny domains na sub-folders mampiasa ny Advanced Filter under Custom dia manamora ny fanaovana tatitra momba ny fanadihadiana amin'ny anarana tokana. Eo ambanin'ireo sivana amina fanalahidy miavaka amin'ny:
Saha A >> Hostname >> (..*
Saha B >> Request URL >> (. *)
TARIKA TOETRA >> Request URL >> $ A1 $ B1
6. URL Lowercase miala amin'ny dika mitovy dika
Ity sivana tsy fahita firy ity dia miantoka ireo pejin'ny tatitra amin'ny vola madinika mba hisorohana ny vokatra azo avy amin'ny tatitra avy amin'ny URL ao amin'ny raharaha ambony.
Mandehana amin'ny Custom
Fidio ny ambany
Fidio kely kely ambany fangatahana URL
7. Fepetra ankapobeny
Ity sivana ity dia mampiharihary ny tena anaran'ny fanondroana spam hita taratra amin'ny Google Analytics.
Field A >> Hostname >> (. *)
Saha B >> Mialà
TORIO TONGA >> Mpamorona >> $ A1
8. US Traffic irery
Ny filamatra ao amin'ny Google Analytics dia afaka manatratra ny fifamoivoizana araka ny toerana. Mandeha any:
9. Exclude Ghost Referrals
Toy ny adiresy spam, toy ny fitsidihan'ny ghost dia manoratra ny fifamoivoizana amin'ny Google Analytics.
Soratra - Kopy sy paste: | free-social-buttons \_ .com | button-for-your-web site \_ .com | best-seo-offer \_ .com | get-free-traffic-now \_ .com 30)
Azo omena be ny fanazavana omena anao mba hahazoana fanazavana bebe kokoa. Azafady, mifandraisa aminay amin'ny fanampiana manokana Source .